Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Faa'iidooyinka doorashada nidaamka qaansheegta otomaatiga ah
Dunida dukaamaysiga onlaynka ah, waxay noqotay mid ka sii muhiimsan sidii hore si loo helo nidaam qaansheegasho toos ah oo otomaatig ah.
Waa maxay faa'iidooyinka otomaatiga ah ee nidaamka qaansheegadkaaga?
Marka hore, lama dafiri karo in otomaatigu uu kuu badbaadin doono waqti badan, wax qiimo u leh milkiile kasta oo ganacsi.
Waxay ka saartaa qodobka aadanaha ka shaqaynta taas oo keenta in la yareeyo fursadaha khaladaadka.
Si kasta oo ay tahay da'da dugsi ee aad jeclaan lahayd in ganacsigaagu yar yahay, waxaa jira waxyaabo qaarkood si kasta uga roon haddii ay yihiin kuwo otomaatig ah, oo qaan -sheegashadu ay noqoto mid iyaga ka mid ah.
Toosinta nidaamka qaansheegadka ayaa lagu yaqiinay inay khaladaadka iyo kharashka hawlgalka ku yareeyaan 50%, taasina waa qadar weyn oo ay tahay inaadan caqabad ku noqon.
Haddii aadan weli si buuxda uga warqabin sameeyaha qaansheegta iyo sida ay faa'iido ugu yeelan karaan ganacsi kasta laakiin gaar ahaan ganacsiga yar yar, markaa waxaad timid meeshii saxda ahayd.
Maqaalkan waxaan kaga hadli doonaa sababta aad ugu baahan tahay inaad ka doorato buug -gacmeed otomaatig ah buug -gacmeed, iyo dhammaan siyaabaha ay u noqon doonto mid wax ku ool ah oo macquul u ah ganacsigaaga.
Waxay badbaadisaa waqti badan
Ma jirto wax la dafiri karo inaad waqti badan badbaadin doontid markaad u beddesho software qaansheegta otomaatig ah. Dunida ganacsiga waqtiga la keydiyey sidoo kale wuxuu la mid yahay lacag la keydiyey, waana inaad isku daydaa inaad gaarto go'aano u suurtagelin kara inay taasi dhacdo.
Haddii aadan fahmin sida softiweerka qaansheegta otomaatiga ah uu kuu badbaadin doono lacag, markaa waxaan ku sharxi doonnaa tan si fudud. Marka kooxdaadu aysan waqti iyo dadaal badan ku bixin raadinta qaansheegyada, taasi waxay keenaysaa in la yareeyo kharashaadka shaqada. Ama waxay diiradda saari karaan waxyaabo ka sii muhiimsan oo ka caawin doona ganacsigaaga siyaabo kale. Waqtiga fog, tani waxay sidoo kale saamayn togan ku yeelan doontaa khadkaaga hoose.
Laga yaabee, mid ka mid ah sababaha ugu weyn ee loogu beddelo nidaam otomaatig ah ayaa ah keydinta waqtiga taasna waxay quseysaa qaansheegadka.
Fursadaha khaladaadka oo yaraaday
Waa shay aadamiga ah in la sameeyo khaladaad iyo khaladaad, laakiin mararka qaarkood khaladaadka ugu yar ayaa ku dambayn kara in kharash badan lagu bixiyo meheradda, xagga waqtiga iyo lacagta.
Iyada oo la adeegsanayo softwares -ka sida Billdu, waxaad si weyn u yareyn kartaa fursadaha khaladaadka sidoo kale waxaad yeelan kartaa nidaam aad u habaysan oo lagula socdo dhammaan kharashyadaada iyo waliba dakhliga soo gala.
Tani sidoo kale waa dhar aad u xoog badan oo ah softwares -ka noocaas ah maxaa yeelay waxay kuu oggolaanayaan inaad ku maareeyso dhammaan waxyaabaha hawlgalka hal goob.
Ganacsi yar ahaan, tani runtii waa wax aad ka faa'iidaysan doonto marka laga reebo inaad haysato goobo badan oo loogu talagalay waxyaabo kala duwan.
Helitaanka astaamaha warbixinta
Iyadoo a nidaamka qaansheegta gacanta, waxaad la kulmi doontaa dhibaato badan si aad u samayso warbixin si aad u tusto daneeyayaasha kale ee meheraddaada, ama xitaa haddii aad rabto inaad naftaada aragto.
Softwares-ka qaan-sheegashadu waxay lahaan doonaan astaamo warbixineed oo ku dhex jira kuwaas oo kuu oggolaan doona inaad soo saarto warbixin qurux badan oo faahfaahinaysa dhammaan hawlahaaga ganacsi dhowr ilbidhiqsi. Tani waxay ku siin doontaa dulmar aad u weyn oo ku saabsan waxqabadka ganacsiga waxayna sidoo kale kuu oggolaaneysaa inaad sameyso mustaqbalka mustaqbalka